Electronics - iHome ► Shopping Time
မူလသို > လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ
ကုန်ပစ္စည်း 834 ခု ရှိပါသည်
Slap Chop Slap Chop သည် အိမ်ရှင်မတွေအတွက် ဂျင်း ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ကြက်သွန်နီ ၊ မြေပဲဆံ ၊ မုန်လာဥနီ ၊ ပြောင်းဖူးဆံ ၊ ပုဇွန်ခြောက် ၊အသီးအရွက်တို့ကို ကြိတ်နိုင်သည် ။
Technical Specifications:· Frame: Black Steel, 4”· Cone: PP Cone with rubber edge· Impedance: 4Ω· RMS Power: 40W, 400W PMPO· Magnet: 72mm
(1) AA ဓာတ်ခဲနှစ်လုံးထည့်ရုံ ဖြင့် ကော်ဖီများကို ဖျော်နိုင်ခြင်း (2) အချိ်န်တိုအတွင်း ကေ်ာဖီဖျော်ပေးနိုင်ခြင်း (3) အတွင်း (စတီး) ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်း
Technical Specifications:Frame: Black Steel, 6” Cone: PP cone with rubber edge Impedance:4Ω RMS Power: 50W, 900W PMPO Magnet: 90mm
Super Wide အမှတ်တံဆိပ် လျှပ်စစ်ရေနွေးကရားအိုး (SW-200B01)
Philips အမှတ်တံဆိပ် Dynamic Microphone (Model No. SBC MD 110)1. အသံထွက်ကောင်းမွန်ခြင်း။2. လှပသေသပ်စွာပြုလုပ်ထားပြီး ခိုင်ခံ့ကောင်းမွန်ခြင်း။
MINE KE အမှတ်တံဆိပ် လျှပ်စစ် ရေနွေးကရား 1. ကော်သား အထူး ကာင်းမွန်ပြီးခြင်း။ 2. ဈေးနှုန်းချိုသာတဲ့ အတွက် အိမ်ရှင်မတို့အကြိုက်ဖြစ်ခြင်း။ 3. ဒီဇိုင်းသစ် နင့် ပုံစံအသစ်ထွက် သည့်အိုးလေးဖြစ်ခြင်း။